Diamond Key says: စတင်အသုံးပြုသူတွေအတွက် အလွန်အကျိုးရှိတဲ့ လေ့လာစရာ ပို့စ်ပါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲစဝင်တုန်းကဆို Test တွေလျှောက်လုပ်လိုက်ရတာ။ :D
စိန်ပေါက်ပေါက် says: ဟိုက်စ်..
များလဲ ပို့ စ် မတင်တာကြာလို့မေ့တောင်မေ့နေပြီ.
မသိတာတွေများကြီးမိုလို့နင့်ဟာလေး Bookmark လုပ်ထားဦးမှ…
နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ် says: အဲဗား စတစ်ကီ တင်ထားရမယ့် နောက်ထပ် ပိုစ့်တခုပါဗျို့…
Harumoto says: ကျွန်တော်မသိသေးတာ အတော်များများ သိလိုက်ရပါတယ်။
video file တွေကော တင်လို့ ရပါသလားခင်ဗျား။
water-melon says: ကျေးဇူး မကြီအံရေ
စိန်ပေါက်ပေါက် says: မုန့် တီတော့ တင်ပါစေဟဲ့
မုန့် တီက နှာကိုပွင့်စေသတဲ့
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: တိန် …
မုန့်တီတော့ တင်မလားဟဲ့ …
မုန့်တီဆို နာ့ဟာနာ စားမှာပေါ့ …
အဲ … ပိုက်ပိုက်နဲ့တော့ ရောင်းတယ်ဟဲ့ …
တစ်ပွဲ .. ၅၀၀ ရှယ်မုန့်တီ … :D
mg mg says: အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်တာ(ယားနေတာပဲ)၊အယားပျောက်လို့ ကျေးဇူးဥပကာရပါ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကိုစိန်သော့ – ကျနော်လည်း လျောက်ကလိနေတာဗျ၊ အဲ … ယောင်ပြီးတော့ publish ကို မနှိပ်မိအောင် သတိနဲ့ ကလိလိုက်ရဗျာ။
စိန်ပေါက်ပေါက် – နင်က နာ့ဟာလေး ဆိုတာ ဘာကို ကြောတာတုံး၊ ဟင်း .. ရှင်းရှင်းပြောနော် .. :D
နျူးဘာဂိုဏ်းချုပ် – ကိုဂီရေ … ကျေးဇူးပါ လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်နော့ …
Harumoto – Video file ကတော့ တင်လို့ ရပါတယ်ဗျာ … ။ သဂျီးကိုတော့ အရင် မေးဦးဗျ … ။ ဗျို့ … သဂျီး .. ။ ဒီမှာ Harumoto က video file တွေရော တင်လို့ ရလားတဲ့ … :D
water-melon – ကောင်မ လုပ်ပြီး ယူသွားတယ်ဆိုတာ ယောက်ျားစကားအေ့ … ။ ညည်းက .. ပြောတော့ဘူးအေ .. ။
mgmg – နောက်တစ်ခါ ခွေးလီးယားသီး မကိုင်မိစေနဲ့နော် … ။ ယားတတ်တယ်ကွဲ့ … :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 552
winkyawaung says: ကျွန်တော်စသုံးလဲ မတတ်ဘူး။ ယခုလဲ မကျွမ်းကျင်သေးပါဘူး။ ပညာယူထားလိုက်ပါတယ်နော်။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဟုတ်ကဲ့ … ကိုဝင်းကျော်ရေ …
ကျနော် ကလိမိတာတွေကို ဝေမျှတာပါ …
ခင်ဗျားလည်း ကလိကြည့်ပေါ့ဗျာ …
အဲ … တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့ ကျနော်ကတော့ သိဝူးနော် …
သို့ပေသိ ကိစ္စရှိပါဘူး … ။ သဂျီး တိုင်တည်လိုက်ပေါ့ … :D
kyeemite says: ကောင်မ..ဒီလိုတော့လဲအတော်သားဂလား…ကျေးဇူးပါ အံဇာမရေ့..များလဲ မိစိန်ပေါက်လို
နင့်ဟာလေး Bookmark လုပ်ထားဦးမှ…
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဘုတ်မက် ဆိုတော့ စုပ်ကပ် …
နာ့ဟာလေး ဘုတ်မက် လုပ်ထားမယ် ဆိုတော့ … ဟီဟိ
ကြောတော့ဘူးနော် … မိကြီးမိုက် ..
ဆူး says: စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ်ပေးထားတာပဲ.. ချီးကျူးပါတယ်။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: မမဆူးရေ …
ကျနော့်ခေါင်း မိုးကောင်းကင်နဲ့ ပြေးဆောင့်မိသွားသလားပဲ …
မမဆူးက ချီးကျူးပါတယ်ဆိုလို့လေ … :D
nozomi says: ကျေးဇူးတော့ တင်ပါတယ် ဗျာ ဒါပေမဲ့ အပြည့်မတင်နိုင်သေးဘူး
ပုံတွေက ဘယ်နှစ်ပုံ တင်ထားလဲ မသိဘူး တစ်ပုံပဲ မြင်ရတယ်
နောက်လဲ ဒါမျိုးလေးတွေ ဆက်တင်ပေးပါဦး
ဒီနေ့ ကျွန်တော့ ပို့စ် မှာဗျာ ပုံလေး တစ်ပုံ ထည့်ချင်တာ Insert/upload ဆိုတာ နှိပ်လို့ကို လုံးဝ မရဘူး
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ သိသူများ ပြောပေးကြပါဦး
အခက်အခဲ ရှိလို့ သူကြီး ဆီ လှမ်းအကူအညီတောင်းတာ
မိန်းမခိုင်းတာတွေ လုပ်နေရလို့ထင်တယ် ဖြတ်ပိုင်းပြန်မလာဘူးဖြစ်နေတယ်
ဒီသူကြီး တော့ ဒီဘ၀ နေနှင့်ဦးပေါ့ ဗျာ
နောက်ဘ၀ ကြမှ ယောက္ခမတော်ပြီး နှိပ်စက်ပစ်လိုက်ဦးမယ်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကိုနိုဇိုမီရေ …
ကျုပ်တို့ သဂျီးကို ယောင်လို့များ ယောက္ခမ တော်လို့ စိတ်မကူးလေနဲ့ဗျို့ …
သဂျီးတူမ ယူမယ် တကဲကဲလုပ်နေတဲ့ ပေါက်ဖော်တောင် အခု … ဟိုဒင်းဟိုဟာ ဖြစ်သွားပြီဗျို့ … (ဒီစာသား ပေါက်ဖော် မမြင်ပါစေနဲ့ဗျား … :D )
ကျနော် တင်ထားတဲ့ ပုံတွေထဲမှာ ပို့စ်ထဲ ပုံထည့်တဲ့ ပုံလေးလည်း ပါတယ် ခင်ဗျ။
ပုံတွေတောင် အကုန်မမြင်ရလောက်အောင် ကွန်မကောင်းရင်တော့ ပုံမတင်နဲ့ဗျို့ ….. ။ Loading ကနေ ရှေ့ဆက်တက်မှာကို ဟုတ်ဘူးဗျ။
ချာလီဂဇက်ဒလဝမ် says: အခုမှ အားလုံးရှင်းသွားတော့တယ် ကလိချက်က တန်ဖိုးရှိပါပေ့ ။
သများတို့လို ဟိုမရောက် ဒီမရောက် အသုံးမတည့်သူ အဖို့ တန်ဖိုးကြီးပါပေ့။
ကျေးချူး တင်ပါလယ်ချင့် ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: သများကလည်း ကျေးချူး ပြန်တင်ပါလယ်ချင့် … ။
သများရဲ့ ပို့စ်ကြောင့် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် အများကြီး ဝမ်းသာပါလယ်ချင့် … ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ထပ်ကလိလိုက်ပါအုံး။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: လေးပေါက်က ကလိ ဆိုလို့ ကလိမှာနော် …
ပြီးမှ အပြစ်မတင်နဲ့နော် … :D
ပေါက်ဖော်တို့၊ ဗြဲသီးတို့ ၊ ကြီးမိုက်တို့ရဲ့ . နှာခေါင်းတွေ၊ နားတွေ .. စတဲ့စတဲ့ အပေါက်တွေကို ကလိဖို့ လည်း ကျန်သေးသလားလို့ဗျို့ …. :D
မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says: ကိုအံစာတုံးရေ ကျနော့်အတွက်ရော တခြားရွာသားတွေအတွက်ပါ အင်မတန်ကောင်းတဲ့
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကိုနာဂရေ …
ကျနော် တစ်မနက်လုံး ကလိထားရသမျှ ကိုနာဂတို့အတွက် လက်ဆောင် ဆိုတော့ ကျနော်လည်း အများကြီး ဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာ … ။
ကျေးဇူးပါ … ။
windtalker says: ဘိုတုံး ကောင်းမှု နဲ့ မှ အခုမှဘဲ သေချာသိရသဗျာ ။
လုပ်တော့ လိုက်မလုပ်တော့ပါဘူးဗျာ ။
ကျုပ် က လှေသူကြီး ရိုးရိုးထိုး မျိုးကလား
Thel Nu Aye says: မမအံရေကျေးဇူးကြီးပါပေ့။ အားလုံးသိသွားပြီ။ အခုတော့သိပြီမင်းကိုကိုယ်——————။ ကျေးဇူးတင်သည်လို့ပြောမလို့ပါ။
pu ma says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တီတီအံ့
Khin Latt says: သိချင်တာတွေရော၊ မသိသေးတာတွေရော သိလိုက်ရလို့ ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး မျှဝေတာလေးကို ဆလုရိုက် သွားပါတယ်။
ကျေးဇူးလဲ အများကြီးကို တကယ်ကြီးကို တင်ပါတယ်။
ba gyi says: ကိုအံစာတုံးကြီး၊စေတနာပါပါ့ဗျား၊
ကျေးဇူးဗျာ ကျနော်လည်းစုံအောင် မကလိဘူးသေးတော့၊ ခူးပြီးခပ်ပြီးရတွားဘီ။
etone says: ကိုအန်စာတုံးရေ .. အကျိုးပြုစာလေးပါပဲ .. .တစ်ချို့ command တွေက ကိုယ်မသိတာတွေတောင် ပါနေသေးပါလားနော် … အသစ်တွေအတွက် .. ဒီလိုပို့စ်လေးတွေ များများရှိနေသင့်ပါတယ် … ။
Tin Tin says: ကိုအံစာတုံးရေ ..
ကျမက မန်ဘာအသစ်ပါ၊ စာဖတ်ပရိတ်အနေနဲ့တော့ကြာပါပြီ။
အခုလို အသုံးပြုပုံ instructions တွေကိုအသေးစိတ် သိရလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ဒီ blog မှာတင်သမျှမန်ဘာအားလုံးရဲ့ post and comments အားလုံးကိုအမြဲတမ်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
updated information နှင့် ဗဟုသုတ အမျိုးမျိုးရတဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားလုံးက စည်းလုံးပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့စာတွေရေးကြတော့ ၀င်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပါပျော်ရပါတယ်။
padonmar says: အနန္တ စကြ၀ဠာ ကျေးဇူးပါ။
အန်တီတို့မှာ ကိုယ့်Post လေး လှအောင် စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ ကိုယ့်သူမေးသူ့ကိုယ်မေး တင်နေရတာ။
ကဲ ဒါကြည့်ပြီး စမ်းအုံးမယ်။
MaMa says: သိသင့်သလောက်တော့ သိရပြီ။
ကွန်ပြူတာဟာ အထီးလား အမလား ဆိုသလို….
အံဇာတုံးဟာ………. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3142
surmi says: ကျုပ်ကစာတောင်ဖြောင်.အောင်မနည်းရိုက်နေရတော. …
မောင်ရင်ပြောမှဘဲသိတော.တယ် ။တော်တော်လေ.လာမှုကောင်းတာဘဲ ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကိုပေ … မသဲနုအေး … pu ma … အရီးလတ် …. ဘကြီး …. မအိတုံ … တင်တင် ….
အန်တီ ပဒုမ္မာ … မမ … surmi ………
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ ခင်ဗျာ ……… ။
အံစာတုံးက အစိုပါဗျ …။ ဒါနဲ့ တိုးတိုးလေးတော့ ပြောလိုက်ရဦးမယ် ..
ဟို .. ပေါက်ဖော်၊ ဗြဲသီး၊ ကြီးမိုက် တို့ကတော့ ဟိုဒင်းတွေဗျို့ … (အနားနား ကပ်ပြောသော လေသံတိုးတိုးဖြင့်)
စိန်ပေါက်ပေါက် says: ဟယ်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: တိန် ..
နာ့အသံ ကျယ်သွားတယ် ..
kai says: ဖတ်ပါ၊..မှတ်ပါ၊..ပြီးမှတင်ပါ..မှာ အမှတ် (၃)အနေနဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ်..
အခုလိုပညာမျှဝေတဲ့အတွက်.. သာဓုပါနော..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
kyeemite says: အံဇာမရေ..ခုမှဘဲတကယ်ရှင်သွားတယ်တော့..နို့ များတို့ကသိမှသိဘဲ..ဟာဗျဲ..ဟာဗျဲ..
ငပွကြီး says: ကိုအံ့ရေ ကျုပ်လဲ ဓါတ်ပုံတင်ချင်လို့ အဲဒီအတိုင်းလုပ်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ပုံအောက်မှာ ဘယ်လိုစာရေးရတယ် အားလုံးပြီးရင် ဘာကိုနိပ်ရတယ် နဲနဲသင်ပေးပါဦး
လေးစားစွာဖြင့် —-တပည့် ငပွ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: “… 1. ပုံလေးတွေ တင်ချင်တဲ့အခါ ဒါလေးကို သုံးပါ။
2. ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာထဲက ပုံတွေကို တင်ချင်ရင် ပုံထည့်ရမယ့် နေရာလေးပါ။ …”
အထက်က ပုံ ၂ ပုံကို ကြည့်ပါဗျာ။ ပြီးတော့ Select Files ကနေ ပုံရွေးပြီးသွားရင် သူက auto အက်ပလုပ် တင်ပါလိမ့်မယ်။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်သွားရင် အဲဒီ ဒေါ့တက် ပြထားတဲ့ ဘောက်စ်ကြီး အောက်မှာ ကိုယ်တင်တဲ့ ပုံရဲ့ နမူနာနဲ့တကွ အချက်အလက်တွေကို ပြပါလိမ့်မယ်။ (ကွန် နှေးနေရင်တော့ ၁၀၀ ပြည့်ဖို့ နည်းနည်း စောင့်ရတယ်)
ပုံအောက်မှာ စာထည့်ချင်ရင်တော့ Caption ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထည့်ပါဗျာ … ။
အားလုံးပြီးရင်တော့ Insert into post ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ
(ဒါကတော့ ပုံလေးတွေ upload ပြီးသွားရင် ပေါ်လာတဲ့အခါ ပြောင်းနိုင်တာလေးတွေပါ။) ဒီပုံလေးမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ် ….။
အခက်အခဲ ထပ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်လည်း ပြောပေါ့ဗျာ။ ရွာသား အချင်းချင်းပဲ ကူညီပေးရမှာပေါ့ … ။ ဟုတ်ဖူးလား …။
မွန်မွန် says: တစ်ခုလောက်သိချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကွန်မန့်ပေးထားတဲ့ ပို့စ်တွေအကုန်လုံးကို ပြန်ရှာချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်က ရှာရမလဲဟင်။
cube points မှာလည်း အကုန်မတွေ့လို့…
ကိုယ့်ကွန်မန့်အောက်မှာ ဘယ်သူတွေဘာတွေထပ်ပြောထားလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: မွန်မွန်ရေ …
ကိုယ့် ကွန်မန့်တွေကို ပြန်ရှာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Admin ရဲ့ Dashboard ကို သွားပါ …
အဲဒီမှာ ဘယ်ဘက်အခြမ်းက Comments ကို နှိပ်ပါ …
အဲဒီမှာ Comments တွေ အများကြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် …
ညာဖက် ထိပ်နားက Search Comments ဆိုတာလေးရဲ့ ဘေးနားက box ထဲမှာ “မွန်မွန်” ဆိုတာ ထည့်ရိုက်ပြီး Enter သာ ခေါက်လိုက်ပါ …
ဒါဆို မွန်မွန် မန့်ခဲ့တာတွေ အများစု ကို တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ ….
တစ်မျက်နှာချင်း သွားကြည့်ဖို့အတွက်တော့ ညာဖက် အောက်ဆုံးနားက page ကူးတဲ့ ဟာလေးတွေနဲ့တာ သွားကြည့်ပါတော့လို့ ……….
Ginny ရေ …
အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ရေးရကျိုး၊ ကလိရကျိုး နပ်ပါပြီလို့ …
ginny says: အားပါးပါး! အရမ်းကိုအကျိုးရှိတဲ့ပို့စ်ပါ။ ဖတ်ပါ၊..မှတ်ပါ၊..ပြီးမှတင်ပါ..မှာ အမှတ် (၃) အနေနဲ့ ထည့်ပေးတဲ့ သူကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မွန်မွန် says: ကျေးဂျူးကမ္ဘာဆာရော..
ငပွကြီး says: တိုးရှဲ့ ရှီးဖေါ့ တပည့်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်
ငပွကြီး says: ကိုကိုအံ့ (ဖါးတာ) တင်ပြီးသားပို့စ် ကိုပြန်ဖျက်လို့ရပါသလား ရရင်လဲနည်းနာလေး သင်ပေးပါခင်ဗျာ…
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: တိုတိုပွ ရေ …
တင်ပီးသား ပို့စ်ကို ဖျက်ဖို့ကတော့ …
သဂျီးမင်း ကိုသာ တိုင်တည်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်းရယ်ပါ …..
အကြံပြုချင်တာကတော့ တင်ပီးပို့စ် ပြန်ဖျက်ပစ်ဖို့ထက် ပို့စ်မတင်ခင် သေချာစဉ်းစားပီး လုပ်တာက အကောင်းဆုံး ပါလို့ ….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1316
unclegyi1974 says: ကောင်းလေစွဒကာ
Ko Hla Myo Swe says: ကိုအံဇာတုံးရဲ့ Post ကို ဖတ်မိတာ နောက်ကျလေချင်းဗျာ။
မနက်ဖြန် ကလိမိသမျှလေးရောရှိရင် တင်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ။
johnphyo paing says: ဒီလိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကလိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာပါပဲ
ကျွန်တော်တို့ လိုနောင်လာနောက်သားတွေပညာရတဲ့ အတွက်
နောက်လည်းများများကလိပေးနိုင်ပါစေလို့ ချီးကျူးထောပနာပြုလိုက်ပါတယ် ကိုကြီးအံရေ
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ကိုမဟာအန်စာတုံး..ရေ
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: URL မှာ….
မစ္စတာ တောက်တဲ့ says: ဂနေ့ဒေါ့ ..
အချိန် မရတော့လို့ ..
မြန်မာနဲ့ တောင်ကိုရီးယားပွဲ အမီ ပြေးလိုက်ဦးမယ် ..
နောက်တော့မှ ပြောမယ်နော့ ..
နာ့အစား ညည်းပဲ ဖြေပေးလိုက်ပါနော့ …
ပလိစ် ….. အဟိ .. ဂွိ
candle . says: I don’t know how to use ” TAG ”.
How to put comma .
PLS , explain me… hope soon as reply …many thank !!
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ပို့စ် တင်တဲ့ နေရာရဲ့ ညာဖက် အခြမ်းမှာ Tag ဆိုတာ ရှိပါတယ် ..
Catagories ရဲ့ အောက်မှာပေါ့ ..
အဲ့ဒီထဲမှာ ကိုယ့်ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Tag ကို ရေးထည့်ပြီး Add ကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါ။
အကယ်၍ ကိုယ်က tag တစ်ခုထက် ပိုထည့်ချင်ရင်တော့ဖြင့် tag တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာ ကော်မာလေး ခံပြီးသာ ထည့်လိုက်ပါ
မရှင်းသေးရင်လည်း ပြောပေါ့ဗျာ ..
ကျနော် နားလည်သလောက်တော့ဖြင့် ပြောပြသွားပါမယ် ..
candle . says: I clear now .If I want to know something let me ask …PLS…
candle . says: ကိုရာဇာ..
candle က အခုမှရွာထဲ ရောက်တာဆိုတော့ သိပ်မသိသေးဘူး..
ပို့ စ်တင်ချင်လွန်းလို့ မြန်မာစာကိုတစ်ရက်ထဲနဲ့ ရအောင်ကျင့်ပြီး…အဲ့ဒီပို့ စ်ကို သုံး နာရီကြာအောင်ရိုက်ခဲ့ရတယ်…
ပြီးတော့ ကိုရာဇာ ဆီမှာ tag ထည့်နည်း အကူအညီ တောင်းပြီးမှတင်ခဲ့ရတာ…
ဖိုးအောင်ထွန်း says: ဟုတ်ကဲ့ ..
Point ဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင် ပိုက်ဆံပါပဲ ..
အဲ့ဒီ ပွိုင့်တစ်သိန်းပြည့်တဲ့အခါ သဂျီးက အမေဒစ်ကန်ကနေ ပိုက်ပိုက် လွှဲပေးပါလိမ့်မယ် ..
ပို့စ်တစ်ခုတင်ရင် ပွိုင့် ၃၀ ရပါတယ် ..
သူများပို့စ်မှာ ကွန်မန့် တစ်ခါပေးရင် ၁၅ ကျပ် ရပါတယ် ..
နှစ်ခါ ထပ်ပေးရင်တော့ အဲ့လောက် ရတော့ပါဘူး ..
ဒါကြောင့် ကိုယ်ပို့စ်တင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်မန့်ပေးလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
ပွိုင့်တိုးလာပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ ..
Was this answer helpful?LikeDislike 12181
အလင်းဆက် says: ကျေးဇူး..အများကြီး..တင်ပါတယ် ။ခည ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike Newer Comments →